Dibin-daabyada Halaga Daayo Dugsiyada Gaarka Loo Leeyahay..! | Salaan Media
Dibin-daabyada Halaga Daayo Dugsiyada Gaarka Loo Leeyahay..!
Umaddi ma gaadho horumar ilaa iyo ay garato dhibaatada jahliga iyo waxtarka aqoonta oo ah bilawga nolosha binu aadamka taas oo ka bilaabanta inuu qofku waxna qoro iyo waxna akhriyi karo. Hadaba tan iyo markii Somaliland lasoo noqotay gooni isutaaga waxa bilaabmay dadaal dib udhiska dalka siiba goobaha waxbarashada oo ay kaalin wayn kazoo qaateen Dugsiyada Gaarka loo leeyahay, taas oo waqtiyo adag ay kala soo dabaasheen iyagoo hantidoodii gaarka ahayd uhuray sidii ubadka wax loo bari lahaa maadaama dalku dib u dhis ku jiro dawladuna aanay wada dabooli Karin baahida waxbarasho ee dalka.
Hadaba Dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay xil wayn iska saareen tayada waxbarasho iyo sidii ay usoo saari lahaayeen arday ku suntan aqoon iyo akhlaaq. Bulshada reer Somaliland sharaf wayn ayay u hayaan dugsiyadda hoose dhexe iyo sare oo heerkooda aqoonta ay ka muuqato ardayda dhigata oo sanad walba kaalmaha hore ka gala imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose iyo sare ee dalka Somaliland. Runtii dadaalkaas bilaash kuma iman ee maamulka dugsiyadaas ayaa galiyay karti iyo tacab badan maadaam ubaxii wadanka ee mustaqbalka dalka hogaamin lahaa lasoo saarayo.
Mudooyinkan danbe waxaynu maqlaynaa dugsiyo gaar loo leeyahay oo ardaydii ku mdaharaaday sida dugsigayada sare ee Nuuradiin iyo Salaam. Hadaan yar dul istaagi dhacdadii ka dhacday Dugsiga Sare ee Nuuradiin qaybta inamada; runtii dhacdadani sida loo buun buuniyaya waxa ka muuqata in dagaal siyaasadeed lagu qaaday oo dad dano gaar ah lihi isku dayay inay ka faa;iidaystaan. Balse ninka isku daya in waxyeelo dugsi waxbarasho miyaanu ogayn inuu waxyeelay mustaqablkii umadda iyo aayahii ubaxa Somaliland. Tuduc ka mida maansadii saxansaxo ee Abw. Gaariye IHN ayaa wax ku jirtay
“Ninka Xadhig Suryeeyoow Waxa Socota Taariikh”
Dugsiga Nuuradiin uma qalmo in dibindaabyo iyo dagaal siyaasadeed midna waayo waa warshadii aqoonta soo saaraysay ee waliba lagu majeerto tayada waxbarashada Somaliland. Barbaarinta ubadka akhlaaqdooda waa masuuliyad saran Maamulka Dugsiga, Ardayga lagu arko ama lagu helo akhlaaq xumo in la edbiyo oo anshax marin lagu sameeyo waa sunaha waxbarashada mana ah wax la siyaasadeeyo iyo shaadh loo soo xidho ceebaynta iyo cambaaraynta sharafta iyo karaamada dugsiga.
Wasaaradda waxbarashada jsl waan ku bogaadinayaa sida masuuliyada leh sida ay iskaga xil saartay buuqii yaraa ee soo kala dhexgalay ardayda iyo maamulka dugsiga Nuuradiin Boys, Guddi baadhis ahna usaartay soo afjarida hawshan.
W/Q: Jaamac Maxamaed Faraax